အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း (မတ်လ ၂၀၁၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း (မတ်လ ၂၀၁၃)
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း (မတ်လ ၂၀၁၃)
Posted by kai on Mar 7, 2013 in Myanmar Gazette, News | 41 comments
BURMA RELATED NEWS – MARCH 13-14, 2013
AP – Myanmar villagers unhappy that Suu Kyi backs mine
AP – Suu Kyi meets more anger over Myanmar mine
AP – Bitter Myanmar villagers vent their hostility to Suu Kyi for backing copper mine
AFP – Myanmar’s Suu Kyi defends protest-hit mine project
AFP – Fast-changing Myanmar joins consumer age
Reuters – Suu Kyi draws rare rancour over Myanmar mine report
The Wall Street Journal – Myanmar Opposition Leader Visits Controversial Mine
Asia News Network – Myanmar’s draft printers law to reverse freedom gains
Business Wire – Research and Markets: Myanmar Oil and Gas Strategic Analysis and Outlook to 2025 – Supply, Demand, Infrastructure, Investment and Market Shares
Bangkok Post – Myanmar nabs ED drug sellers
Arab News – Burmese to be exempted from residency fees for four years
Channel NewsAsia – Experts say aid flowing to Myanmar may hinder, not help
Channel NewsAsia – Reforms in Myanmar gaining momentum
Scoop – Burmese visit must pay attention to human rights issues
Scoop – Myanmar President Welcomed by Fonterra
UN News Centre – Myanmar: Ban encourages parties to reach ceasefire to end conflict in Kachin
The Yomiuri Shimbun – JICA to aid development of special Myanmar zone
UPI – HRW: Thailand not helping Myanmar reforms
The Irrawaddy – Foreigners to Get Daily Access to Accounts
The Irrawaddy – Suu Kyi Confronted by Hundreds of Angry Anti-Mine Protesters
Mizzima News – Suu Kyi blocked by angry protesters at Latpadaung
Mizzima News – Defense Ministry denies Pangwa airstrikes
Mizzima News – Se Tel villagers protest against Suu Kyi
DVB News – Burma eyes ‘symbolic’ energy deals with the West
DVB News – Peace marchers arrive in rebel stronghold
BURMA RELATED NEWS – MARCH 12, 2013
AP – Myanmar mine protesters reject official report
AFP – Myanmar probe finds phosphorus used in crackdown
AFP – Myanmar and Kachin rebels agree ceasefire talks
Reuters – Myanmar copper mine told to compensate for land grabs
IANS – Myanmar panel wants China-backed mine project
The Washington Post – Veteran Burmese activist Win Tin says democracy icon Suu Kyi is too conciliatory
The Atlantic – It’s Tough to StartaNewspaper After 50 Years of State Censorship
Channel NewsAsia – S’pore companies can help shape Myanmar’s business landscape
The Nation – Silken threads that bond Thailand, Myanmar relations
Eleven Myanmar – Myanmar military denies scaling up operations in conflict areas
Eleven Myanmar – Press Council awaits reply from President over press bill objection
The Age – Patchy progress for Burma as leader’s visit looms
Energy and Capital – Myanmar Oil Discovery Could Be Huge
SBS – Concerns over visit of Burma’s President
The Independent – Aung San Suu Kyi faces mounting anger from Burmese activists over her support for controversial copper mine
The Irrawaddy – Activists, Locals Reject Letpadaung Inquiry
The Irrawaddy – Army Prevents Kachin Peace Marchers from Reaching Laiza
The Irrawaddy – Government Tries to Seduce Karen Rebels with Investment
Mizzima News – No hasty ceasefire, says KIO
Mizzima News – Myanmar stretches rubber exports
Mizzima News – ITD ‘relieved’ that Dawei project is moving ahead
BURMA RELATED NEWS – MARCH 11, 2013
AFP – N. Korea should copy Myanmar’s example: US official
AFP – Myanmar government and Kachin rebels renew talks
Reuters – Italian-Thai to spend initial $300 mln on Myanmar’s Dawei
Channel News Asia – UN monitor urges Myanmar to tackle sectarian unrest
Channel News Asia – Singapore looks to Myanmar as potential food source
Fuseworks – President of Myanmar to visit NZ
ABC News – Burmese president to visit Australia
ABC News – Report: Myanmar Police Used Phosphorus at Mine
IANS – Myanmar to hold kite show, contest
IANS – India, Myanmar to forge closer non-political ties
UPI – U.N. gives mixed report on Myanmar
UPI – U.N.: Myanmar rights better but need work
Eleven Myanmar – US company to build food factory in Myanmar
Eleven Myanmar – No Rohingya in Myanmar; say international experts
Asia News Network – Myanmar beverage sector frets as giants return
New Straits Times – Myanmar woman dies in crash
People’s Daily – Envoy for Asia to prioritize Myanmar ‘for now’
The Irrawaddy – Court Rejects Complaint against President over Protest Raid
The Irrawaddy – Local Authorities Still Wary of Foreign Visitors
The Irrawaddy – Google Chief to Visit Burma
Mizzima News – Govt to explore mining in Chin State
Mizzima News – Hong Kongers scared off by Myanmar property prices
Mizzima News – Little change in NLD as old guard stands firm
BURMA RELATED NEWS – MARCH 08- 10, 2013
AP – Suu Kyi selected to remain Myanmar opposition head
AP – Suu Kyi vows to bring new blood to party
AP – Myanmar opposition holds first party congress
Reuters – Myanmar must face up to junta crimes, U.N. envoy says
AFP – Myanmar must stay in rights spotlight: UN monitor
UPI – Myanmar’s NLD party needs ‘new blood’
ABC News – Icon Under Fire: Burma’s Suu Kyi Eyes Presidency Amid Criticism
IANS – Myanmar, US to cooperate in wide range of sectors
IANS – Golf championship to be held in Yangon
New York Times – In Public Eye, Shining Star of Myanmar Loses Luster
New York Times – Myanmar Opposition Leader Vows Party Reform
Marketwire – Centurion Advances Gold Mineral Concession Applications in Myanmar
Asia News Network – Thai-based ad, media firms flock to Myanmar
The Canadian Press – Cisco to set up training centres in Myanmar after delegation with Google, HP, Intel, Microsoft
Financial Times – Myanmar: cutting red tape – the Public Services Performance Appraisal Task Force
Times of India – India, Myanmar all set for joint naval exercise
The Korea Herald – Eximbank, IIAC consider joining forces for airport project in Myanmar
Hampstead & Highgate Express – Burma icon Aung San Suu Kyi sends personal message to Camden primary school
Times of Oman – Cambodia opposition head compares notes with Suu Kyi
The Irrawaddy – Finally,aWindow for Peace in Burma
The Irrawaddy – Constitutional Reform Key, But Still Far Off: Report
The Irrawaddy – Tax Rise Plans Prompt Worries Over Wasteful Spending, Transparency
Mizzima News – Suu Kyi calls on NLD members to work for the nation
Mizzima News – Amnesty calls for continued human rights monitoring in Myanmar
BURMA RELATED NEWS – MARCH 07, 2013
Reuters – Suu Kyi’s inexperienced party in search of policies for Myanmar
Reuters – Rakhine crisis risks spread, endangering Myanmar reforms: UN
Reuters – USAID optimistic on Myanmar work, but firm on terms
AP – Cisco to set up tech training centers in Myanmar
IANS – Myanmar allows companies to open forex counters
New York Times – Myanmar Reforms Could Falter, U.N. Investigator Says
Asia News Network – New Myanmaratest for Suu Kyi’s party
Channel NewsAsia – Myanmar’s NLD set for landmark congress
The Nation – GE expands in Myanmar, but not at expense of Thai operations
Eleven Myanmar – Thein Sein says Myanmar has no plan to amend citizenship law
Eleven Myanmar – ADB urges Myanmar to integrate with ‘the most dynamic region in the world’
GlobalPost – Myanmar shelter offers refuge for HIV patients
The Irrawaddy – Beer Wars in Burma as Rival Brewers Battle for New Market
The Irrawaddy – Disgruntled NLD Member Lashes Out at Party Leaders
The Irrawaddy – NKorea Hit by New UN Sanctions After Nuke Test
Mizzima News – Myanmar’s inflation at 1.95%
Mizzima News – Taxes slashed on importing pick-up trucks
Mizzima News – Govt works ‘tirelessly’ for peace, Thein Sein tells Brussels
DVB News – British activist fighting to avoid Thai jail term
DVB News – Soldiers assault local during wedding party
DVB News – The pipeline and its discontents
BURMA RELATED NEWS – MARCH 01- 02, 2013
AP – China executes4foreigners over Mekong murders
AFP – Finnish Nobel laureate sees peace prize for Myanmar govt
Reuters – Games: Myanmar weathers storm in quest for SEA Games gold glut
IANS – Myanmar allows eight private daily newspapers
IANS – Indian scholars to engage with Myanmar
IANS – Myanmar punishes nearly 6,000 in drugs cases
Bernama – Myanmar Strengthens International Cooperation In Drug Elimination
UPI – ICRC gets aid into Myanmar’s Kachin state
UPI – Rights groups put pressure on Myanmar
Xinhua – Myanmar strengthens int’l cooperation in drug elimination
The Nation – Myanmar president upbeat on ending ethnic conflicts
The Nation – Many falsely identify themselves as Myanmar nationals
The Nation – Myanmar’s draft of new press law draws concerns
Goal.com – AFF U16 and U19 Championship to be hosted by Myanmar and Timor Leste
Textileweb.com – Italian Textile Machinery Sector To Prospect In Myanmar
Philippine Center for Investigative Journalism – Myanmar parliament votes to investigate blogger
Asian Tribune -Burma President broadcastsahypothetical radio message
MoneyControl.com – 108 Myanmarese detained for crossing into Indian waters
Jakarta Globe – HackingaPath Between China’s California and Myanmar’s Dracula
The Irrawaddy – Rangoon Car Dealers Protest Eviction from Hanthawady Market
The Irrawaddy – Tensions Grow between Govt and SSA-South
The Irrawaddy – Kachin Group Accuses Burmese Army of Blocking Red Cross Aid
Mizzima News – India on the road to Myanmar
Mizzima News – Power struggle: Myanmar’s energy crisis dissected
Mizzima News – Shan groups warn Thein Sein of continuing fighting
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ( ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃)
ဒို့သဂျီး ဗယ်လင်တိုင်း အိပ်မက် မက်လို့ကောင်းတုန်းကိုး …
လာဘာဗျာ ..မတ်လ လုပ်ပါ သတ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အာမီရမ်တိုက်ပါ့မယ်…
ဟာနမဆက ၀က်နားရွက်ရထားရဲ့ … သုတ်ပြီး မြည်းတာပေါ့…
သဂျီး တော့အိပ်ငိုက်နေပြီလား မူးပြဲနေပီလားမဆိုနိုင်ဘူး.. :harr:
ဟိုနေ့က မီးလန့်လို့ ယောင်သွားတာ နေမှာပေါ့
နည်းနည်းလေးဒေါ့ လွဲနေမယ် …
အို .. လွဲလွဲလေးလည်း ကောင်းဘာဒယ် …
စိတ် ကျေနပ်ရင် ပီးဘီ ကောင်းဒါးဘဲ …
လိုအပ်ရင် ရူးလိုက်အုံး …
ဆိုတော့.. လောလောဆယ်.. သတင်းခေါင်းစဉ်လေးတွေကူးတင်လိုက်ကြောင်း..
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရုံးခွဲ ဖွင့်ခွင့်ပေးသင့်
နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေး ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ ၀င်ဖို့ လွှတ်တော်မှာ ဆုံးဖြတ်
NLD ဗဟို ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦး အား တာဝန်မှ ရပ်စဲ
သက်တမ်းရင့်ပါတီ NLD ရဲ့ ပထမဆုံး ညီလာခံ
စစ်ဆေးခံရသူ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ထမ်းတချို့ မူလနေရာတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ
နိုင်ငံခြား ထွက်ခွာခွင့် D Form စနစ် အဆုံးသတ်မည်
အဆိပ်သင့် ကျုံမကူး ချောင်း (ရုပ်/သံ)
သထုံမြို့နယ်၊ ကွင်းကလေးဒေသ တွင် ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း တွင်ကျယ်နေ
သဂျီးရေ ရွာထဲကို လက်ပစ်ဗုံးတွေ အငှားလက်သုံးပြီးပစ်နေလို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့် posts တွေအားလုံးကိုခေတ္တဖျက်ပေးဘို့တောင်းပန်ပါတယ် ရွာထဲ အေးချမ်းမှပြန်ဝင်ခဲ့ပါ့မယ်
မင်းကိုနိုင်( ဗွီအိုအေနဲ့ သီးခြားမေးမြန်းမှု)
လက်ပံတောင်းတောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်၊ အကြံပြုချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါက အကျိုးရှိစေနိုင်သည့် အချက်များပါဝင်သော်လည်း ဒေသခံများအတွက် အငြင်းပွားစရာများ ရှိနေဆဲဖြစ်
Created on Tuesday, 12 March 2013 22:54
CREDIT TO – FIRST ELEVEN JOURNAL
လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသ၊ဆည်တည်းရွာတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့က လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းရေးနှင့်
သပိတ်စခန်းများအား အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့သော တာဝန်ရှိသူများကို အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် ပြုလုပ်သော လူထုအစည်းအဝေး
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာပါ ကော်မရှင်၏ တွေ့ရှိအကြံပေးချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါက အကျိုးရှိသည့် အချက်များပါဝင်သော်လည်း ဒေသခံများနှင့် အငြင်းပွားစရာအချက်များ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်အချို့က သုံးသပ်သည်။
အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်သည် ကြေးနီမိုင်းလုပ်ငန်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုရန် သင့်/မသင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများနှင့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ် အမှန်ပေါ်ပေါက်စေရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နိုင်ငံ၏အနာဂတ်အတွက် အရေးပါသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အစဉ်အလာများ ပေါ်ထွန်းစေရေးအ တွက်လည်းကောင်း သုံးသပ်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များ တင်ပြနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအား ဖော်ပြထားပြီး မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင် သိပ္ပံအဖွဲ့အား တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ မြန်မာ့ဝန်းကျင်အဖွဲ့၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၊ ဘာသာရပ်နှင့် ဥပဒေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ တွေ့ရှိအကြံပြုချက်များ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်များ၏ တွေ့ရှိအကြံပြုချက်များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် နိုင်ငံတကာပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ဆောင် ရွက်သင့်သည့် နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ သို့မဟုတ် လွန်စွာအားနည်းလျက်ရှိကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်ဟု လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ /မရှိ သုံးသပ်မှုတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာမှာ ပါဝင်တဲ့အချက်တွေမှာ တော်တော်များများ လက်ခံနိုင်တဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။သို့သော် ဘ၀င်မကျဖြစ်တာကတော့ ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သိပ်သဘောမကျပါဘူး။ ဒီစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒေသခံ တွေအားလုံးနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး သဘောတူညီချက်ရမှ အကောင်အထည် ဖော်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ အခုဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ လောလွန်းအားကြီးနေတယ်လို့ မြင်တယ်။ အချိန်ကတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ယူရမှာပါပဲ။ ဘယ်စီမံကိန်းမဆို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်တဲ့ စီမံကိန်းရယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး။ အနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်တာတွေချည်းပါပဲ။ အခြားနိုင်ငံက စီမံကိန်းတွေဆိုရင် နိုင်ငံတကာ စံချိန် စံညွှန်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ လုပ်ကြပေမယ့် ဒီစီမံကိန်းမှာက နှစ်ဖက်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကပဲ ကုမ္ပဏီအဆင့်နဲ့ လုပ်နေကြတာပါ…
ယင်းကော်မရှင်၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ကြေးနီစီမံကိန်းအား နိုင်ငံတော် နှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် ရေရှည်အကျိုးစီးပွား၊ အပြုသဘောဆောင်သည့်အမြင် စသည့်မူဝါဒများအပေါ် အခြေခံ၍ ကော်မရှင်၏ အထွေထွေ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”အစီရင်ခံစာမှာ ပါဝင်တဲ့အချက်တွေမှာ တော်တော်များများ လက်ခံနိုင်တဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။သို့သော် ဘ၀င်မကျဖြစ်တာကတော့ ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သိပ်သဘောမကျပါဘူး။ ဒီစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒေသခံ တွေအားလုံးနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး သဘောတူညီချက်ရမှ အကောင်အထည် ဖော်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ အခုဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ လောလွန်းအားကြီးနေတယ်လို့ မြင်တယ်။ အချိန်ကတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ယူရမှာပါပဲ။ ဘယ်စီမံကိန်းမဆို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်တဲ့ စီမံကိန်းရယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး။ အနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်တာတွေချည်းပါပဲ။ အခြားနိုင်ငံက စီမံကိန်းတွေဆိုရင် နိုင်ငံတကာ စံချိန် စံညွှန်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ လုပ်ကြပေမယ့် ဒီစီမံကိန်းမှာက နှစ်ဖက်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကပဲ ကုမ္ပဏီအဆင့်နဲ့ လုပ်နေကြတာပါ။ ဒေသခံတွေကို ရစရာရှိတဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ပေးရမယ်။ ဒေသခံတွေမှာ လုပ်ကွင်း လုပ်ကွက်တွေ ပျက်ရတယ်။သောက်စရာရေတောင် စိမ့်ဝင်နေတဲ့ ရေထဲမှာ သောက်ဖို့ မသင့်တော်အောင် အဆိပ်ဓာတ်တွေ ပါဝင်နေတယ်။ ပြောရရင် ဒေသခံတွေ ကျေနပ်အောင် အငြင်းပွားမှုမရှိတဲ့ အခြေအနေရောက်မှ ဆက်လုပ်သင့်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ စီးပွားရေးကို ဇောင်းပေးပြီး လူမှုရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို သိပ်အလေးမပေးတဲ့ဟာလို့ မြင်ပါတယ်” သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင် ဦးအုန်း(FREDA)က ပြောပါသည်။
ဒီစီမံကိန်းက ရာသီဥတုဒဏ်ရော၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရော၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးရော အားလုံး ထိခိုက်လို့ ကျွန်မတို့က ဒီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေးကို တောင်းဆိုတာ။ အခုက ကော်မရှင်ရဲ့အဖြေက ကျွန်မတို့အတွက် မကျေနပ်စရာ အဖြေထွက်လာတာ။ ကျွန်မတို့ မကျေနပ်တာက မီးလောင်ဗုံးမှန်းသိရဲ့နဲ့ မီးခိုးဗုံးလို့ ပြောတာကိုလည်း မကျေနပ်ဘူး…
” ဒီစီမံကိန်းကြီးကို ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင် ဒေသခံတွေ ဒီလောက်နစ်မွန်းတာတောင်မှ ပေါ့ပေါ့တန်တန် အလုပ်လုပ်သွားတာ။ သူတို့ဘက်က စကားထွက်တာက ကလေးဆန်တယ်။ ကျွန်မတို့ကတော့ မကြိုက်ဘူး။ သူတို့ လက်ခံထားတာက နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကို လက်ခံထားတာ။ ဒေသခံတွေက တကယ်ကို နစ်နာနေလို့ ကျွန်မတို့က ဒါကို မလုပ်စေချင်တာ။ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းက နဂိုကတည်းက မိုးနည်းတာ။ အဲဒီတောင် ၃၃ လုံးသာ မရှိရင် ပိုပြီးတော့ မိုးနည်းသွားမှာပေါ့။ ကျွန်မတို့ ဒီစီမံကိန်းက ရာသီဥတုဒဏ်ရော၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရော၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးရော အားလုံး ထိခိုက်လို့ ကျွန်မတို့က ဒီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေးကို တောင်းဆိုတာ။ အခုက ကော်မရှင်ရဲ့အဖြေက ကျွန်မတို့အတွက် မကျေနပ်စရာ အဖြေထွက်လာတာ။ ကျွန်မတို့ မကျေနပ်တာက မီးလောင်ဗုံးမှန်းသိရဲ့နဲ့ မီးခိုးဗုံးလို့ ပြောတာကိုလည်း မကျေနပ်ဘူး။ ကျွန်မအခု ထိုင်းက ပြန်လာတာ။ ဦးတိက္ခဥာဏနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။ သူက သူ့တစ်ကိုယ်လုံး မီးတွေလောင်နေလို့ လူးလှိမ့်ပြီး ငြှိမ်းခဲ့ရတာပါတဲ့။ ရဲတွေရှေ့မှာ ငြှိမ်းခဲ့ရတာပါတဲ့။ ရဲတွေကို မင်းတို့လုပ်ရပ်တွေကို ကြည့်ကြစမ်းပါကွာ ဆိုတော့ သူတို့က သူတို့ မျက်နှာကို ဒိုင်းတွေနဲ့ ကာထားတယ်တဲ့။ အဲဒါက မီးခိုးဗုံးဖြစ်နိုင်ပါ့မလားတဲ့။ ဒေသခံတွေက လျော်ကြေးနည်းလို့ ဆန္ဒပြတာပါတဲ့။ ကျွန်မတို့က လျော်ကြေးနည်းလို့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ပိုက်ဆံကို နည်းနည်းလေးတောင် မလိုချင်ဘူး။ သူတို့ ကျွန်မတို့ကို ပြောခဲ့တာက ၁၂ ရက် ၁၂လ ၂၀၁၀ တုန်းက ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာက ညည်းတို့ လယ်တွေကို အပိုင်သိမ်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ယန္တရားကားတွေ ဘာတွေ မောင်းတဲ့အခါ သီးနှံတွေ ပျက်စီးနိုင်လို့ သီးနှံလျော်ကြေး ပေးတာပါလို့ ပြောပြီး ပေးသွားတာ။ အခုကျမှ သူတို့က နည်းလို့လား ဘာလား ထပြောတာ။ အဲဒီတုန်းက သီးနှံလျော်ကြေးမယူတဲ့ လယ်သမားတစ်ယောက်ကိုတောင် ထောင်ချခဲ့သေးတာပဲ။ အဲဒါကို သူတို့က မလှိမ့်တပတ်နဲ့ ပြောတာမျိုးကို ကျွန်မတို့ လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ သူတို့က ဒေသခံတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းတာမျိုး ဘာမျိုး ဘာတစ်ခုမှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိဘူး။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ မိုးလေ၀သတွေနဲ့တွက်ရင် ဒီစီမံကိန်းက လုံးဝ မလုပ်သင့်ဘူး။ ကျွန်မတို့ ဒေသ ခံတွေအတွက် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး လုံးဝပျက်သွားမှာ။ အဲဒါမျိုးတော့ ကျွန်မတို့ လုံးဝ မခံနိုင်ဘူး။ ကျွန်မတို့ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ သူက ဒီစီမံကိန်းကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမိန့်ထုတ်လို့ရတဲ့ သူမဟုတ်တော့ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းတာပဲ ရှိတာ။ ဖျက်သိမ်းပေးနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ ဘာမှ မပြောလိုဘူး” လက်ပံတောင်းတောင်အနီးရှိ ၀က်မှေးကျေးရွာမှ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းက ပြောပါသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း သတ္တုတွင်းနယ်မြေတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမှုဝန်းကျင် ပြဿနာများသည် မြေယာသိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပြောင်းရွေ့နေရာ ချထားမှုအပေါ်တွင် အဓိကအားဖြင့် အခြေပြုခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်ရကြောင်း၊ ကြေးနီသတ္တု တွင်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်အား ပွင့်လင်းမြင်သာစေမှု (Transparency)၊ သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မြေလိုအပ်ချက်အား စနစ်တကျ သိရှိနားလည်စေမှုနှင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းများကြောင့် နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာအရပ်ဒေသအတွက် အကျိုးကျေး ဇူး ရှိနိုင်ပုံများအား သိသာသော အထောက်အထား၊အချက်အလက်များ ပြသမှု၊ ထိုက်တန်သော ပေးလျော်မှု၊ အစားထိုးတည်ဆောက်ပေးမှုနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘ၀အတွက် ထိရောက်သော စီမံဆောင် ရွက်ပေးမှုများ လိုအပ်သည်ဟု အကြံပြုကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးသော ကြေးနီစီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းသို့ ကြီးမားသော လုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးကျေးဇူး ရှိ သည်မှန်သော်လည်း ရရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူးမှာ နည်းပါးသည်ဟု ကော်မရှင်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဤအချက်ကိုသုံးသပ်၍ အလေးထား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ကော်မရှင် စီးပွားရေးပညာရှင်၏ အကျိုးရှိမှုတွက်ချက်ခြင်း (Benefit Calculation) အရ ယခုလုပ်ငန်းတွင် နိုင်ငံတော်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်တို့ ရရှိသည့် အကျိုးစီးပွားသည် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရရှိသည့် အကျိုးစီးပွားထက် ပိုမိုကြောင်း တွက်ချက်ဖော်ပြထားသည်။ စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်မှု ရှိသော်လည်း အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းထားသည်။
စောင့်ကြည့်တာ ဘယ်သူက စောင့်ကြည့်မှာလဲ။ အခုသတင်းစာထဲမှာ ပါတယ်။ အဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ဆိုပြီး။ အဲဒီလူတွေက တပ်ကလူတွေဗျ။ သေချာ စောင့်ကြည့်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါ့မလားပေါ့။ စာရွက်ထဲမှာရော ဟိုလိုလုပ်ရမယ်၊ ဒီလိုလုပ်ရမယ် ပါတာပေါ့။ တကယ်ရော ဦးပိုင်တို့၊ ၀မ်ပေါင်တို့က လိုက်လုပ်နိုင်ပါ့မလား။ စောင့်ထိန်းပါ့မလားပေါ့။ အဲဒါက တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဗျ။ သူတို့ထဲက အကြံပေးချက်အတိုင်း ဘယ်သူကလုပ်မှာလဲ။ သေချာလုပ်မှာလား။ အဲဒါကိုဘယ်သူက Enfore လုပ်မှာလဲပေါ့။ အဲဒါက အဓိကအချက်ပဲ…
”မုံရွာကလူတွေက ဒီစီမံကိန်းကြောင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြီးများ ညစ်ညမ်းကုန်မလားဆိုပြီး စိုးရိမ်ပူပန်တာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေက ဒီအစီရင်ခံစာကြောင့်တော့ လျော့ပါးသွားဖို့ မရှိဘူးထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီထဲမှာ ဖတ်ကြည့်ရင် စွန့်ပစ်တဲ့ကန် ရှိတယ်လေ။ အဲဒါက သိပ်ပြီး ဟန်မကျဘူး။ ရေကြီးလို့ရှိရင်၊ ဒါမှမဟုတ် မိုးတွင်းကျလို့ရှိရင် ရုတ်တရက်ပေါ့။ အဲဒါမျိုးဖြစ်ရင် အဲဒါတွေက မြစ်ထဲရောက်မှာဗျ။ နောက်တစ်ခုကလည်း သူတို့သေချာ လုပ်မှပေါ့။ EIA,SIA အဲဒါတွေလည်း သေချာပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မျိုးလည်း ပါတယ်လေ။ အကြံပြုချက်ထဲမှာ။အဲဒါတွေကို တကယ့်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဖို့ပေါ့လေ။ အဲဒါကို စောင့်ကြည့်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ စောင့်ကြည့်တာ ဘယ်သူက စောင့်ကြည့်မှာလဲ။ အခုသတင်းစာထဲမှာ ပါတယ်။ အဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ဆိုပြီး။ အဲဒီလူတွေက တပ်ကလူတွေဗျ။ သေချာ စောင့်ကြည့်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါ့မလားပေါ့။ စာရွက်ထဲမှာရော ဟိုလိုလုပ်ရမယ်၊ ဒီလိုလုပ်ရမယ် ပါတာပေါ့။ တကယ်ရော ဦးပိုင်တို့၊ ၀မ်ပေါင်တို့က လိုက်လုပ်နိုင်ပါ့မလား။ စောင့်ထိန်းပါ့မလားပေါ့။ အဲဒါက တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဗျ။ သူတို့ထဲက အကြံပေးချက်အတိုင်း ဘယ်သူကလုပ်မှာလဲ။ သေချာလုပ်မှာလား။ အဲဒါကိုဘယ်သူက Enfore လုပ်မှာလဲပေါ့။ အဲဒါက အဓိကအချက်ပဲ။ အခုကတော့ သူတို့ မဟုတ်တာတွေက ပေါ်လွင်လာပြီလေ။ နံပါတ်တစ်က လျော်ကြေးပေးတာ အင်မတန်နည်းတယ်။ ပေါက်ကြေးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ နောက်တစ်ခုက EIA,SIA မလုပ်ဘူးပေါ့။ နောက်တချို့ဟာတွေမှာ ISO တွေ ဘာတွေ လုပ်မထားဘူးပေါ့။ အဲဒါတွေ ပါတယ်လေ။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက် ပြန်ပြီး ပြင်ဖို့တို့ ဘာတို့ပါတယ်။ အဲဒါကို တကယ်လုပ် မလုပ်ကတော့ အရေးကြီးတယ်။ အဲဒါမျိုး လုပ်ပါတယ်လို့ သေချာမှသာ ဒေသခံတွေက စိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာဗျ။ ကော်မရှင်က တော့ထွက်တယ်။ ဟိုဟာတွေကတော့ လက်ခံသလားပေါ့လေ။ နောက်တစ်ခုက ကော်မရှင်ထဲမှာ တစ်ခုပါစေချင်တယ်။ သူတို့ကြည့်တာက သုံးခုပဲကြည့်တယ်။ နိုင်ငံတော်အကျိုးတို့၊ တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးတို့ အဲဒါမျိုးတွေပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အဲဒီဒေသခံတွေ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေကြတာမျိုးတွေ၊
အဲဒါမျိုး သိပ်မပါဘူး။ အဲဒါမျိုး ပါစေချင်တာပေါ့ဗျာ”ဟု မုံရွာဒေသခံဖြစ်သည့် စာရေးဆရာ ကိုတာက ပြောပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလည်း မပျက်စီးအောင်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ ဒေသခံတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့က အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်ပါပဲ။ ဒေသခံတွေကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေချင်တယ်။ တွေ့ဆိုရင်တွေ့ပါမယ်။ ဘာဖြစ်ချင်တယ်။ ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကို သူတို့နဲ့ ညှိနှိုင်းချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ လိုချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း သူတို့ပေးနိုင်မယ်၊ သူတို့ လိုချင်တာကို လည်း ရမယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးသဘောတူ လုပ်လို့ရပါတယ်။ သူတို့တစ်ဘက်တည်း သဘောနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့က လက်မခံပါဘူး…
”ကျွန်မတို့ ဒီအစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံတော့ မဖတ်ရသေးပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ဖြစ်စေချင်တာက စီမံကိန်းကို မပျက်စေချင်ဘူး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလည်း မပျက်စီးအောင်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ ဒေသခံတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့က အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်ပါပဲ။ ဒေသခံတွေကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေချင်တယ်။ တွေ့ဆိုရင်တွေ့ပါမယ်။ ဘာဖြစ်ချင်တယ်။ ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကို သူတို့နဲ့ ညှိနှိုင်းချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ လိုချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း သူတို့ပေးနိုင်မယ်၊ သူတို့ လိုချင်တာကို လည်း ရမယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးသဘောတူ လုပ်လို့ရပါတယ်။ သူတို့တစ်ဘက်တည်း သဘောနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့က လက်မခံပါဘူး။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ သူတို့ဘက်ကရော ကျွန်မတို့ဘက်ကပါ လိုချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို မညှိနှိုင်းနိုင် သေးရင် အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ မီးလောင်ဗုံးကိစ္စကိုလည်း တစ်ချိန်မှာ တာဝန်ရှိသူ တစ်ယောက်ယောက်ကနေ ဖြေရှင်းပေးပါ၊ ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ် ”ဟု လက်ပံတောင်း ဒေသခံ မအေးနက်က ပြောပါသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းအား ဖြိုခွဲရာတွင် ဖော့စဖောရပ်ဓာတ် ပါဝင်သည့် မီးခိုးဗုံးကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း၊ ဆန္ဒပြသူများကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ဖြိုခွဲသည့်ဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်ပါလျင် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် လေ့ ကျင့်သင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ယင်းမီးခိုးဗုံးမျိုးကို ယာယီ အဆောက်အအုံရှိသည့် နေရာမျိုးတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့် မီးခိုးဗုံး၏ အာနိသင်ကို သိရှိခြင်းမရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ သိရှိခြင်းမရှိဘဲ သုံးစွဲမှုကြောင့် မမျှော်မှန်း မလိုလားအပ်သော မီးလောင်ဒဏ်ရာများ ရဟန်းသံဃာနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့တွင် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်နောင်တွင် ဆန္ဒပြမှုများ ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ လူစုခွဲရန် လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် ထင်သာမြင်သာရှိသည့် အချိန်မျိုးတွင်သာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပြုခဲ့သည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း သပိတ်စခန်းမှ မီးလောင် ဒဏ်ရာရသည့် လူနာများအား ဆေးကုသမှုကို တာဝန်ယူလျက်ရှိရာ ကော်မရှင်အနေဖြင့် လိုအပ်သည်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေသူအားလုံး ဆေးရုံမှ ဆင်းသွားကြပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သော သံဃာတော် ၄ ပါးကိုလည်း ကော်မရှင်အနေဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး နှစ်သိမ့်စကားများကို လျောက်ထားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့် အရှင်သဇ္ဇန၏ ကျန်းမာရေးအခြေအ နေ တိုးတက်လာပြီဖြစ်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် သံဃာတော်ဦး တိက္ခဉာဏ၏ အခြေအနေ တိုးတက်လာနေပြီး ဆက်လက်၍ ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်သေးသည်ဟု ကော်မရှင်အနေဖြင့် သိရှိရကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။
လက်ရှိအတိုင်းပင် ကြေးနီစီမံကိန်းအား ဆက်လက်လုပ်ကိုင်စေမည့် နည်းလမ်းအား စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ချက်များ စနစ်တကျ ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း၊
စီမံကိန်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လာချိန်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤစီမံကိန်းမှ နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးအချို့ ရရှိသော်လည်း ဤမျှကြီးမားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ယခုထက် ပိုမို၍ အကျိုးကျေးဇူးရရှိသင့်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဤနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရန် မသင့်ဟု ယူဆကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကြေးနီစီမံကိန်းအား ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခွင့်မပြုဘဲ ရပ်ဆိုင်းစေမည့် နည်းလမ်းတွင် ယင်းစီမံကိန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရှယ်ရာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ရာ ယင်းလုပ်ငန်းကို ဖျက်သိမ်းမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံသည် ခွင့်ပြုထားသော စာချုပ်ကို လေးစားလိုက်နာခြင်းမရှိဟု ယူဆမှုများ ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးရှုထောင့်မှ ကြည့်လျင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပြေလည်မှုမရှိသည့် အခြေအနေများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သောကြောင့် အခက်အခဲများစွာ ရှိလာနိုင်သည်ဟု သုံးသပ်ထားသည်။
ကော်မရှင်ရဲ့ ဒီစီမံကိန်းအပေါ် အကြံပြုချက်တွေဟာ တစ်ခါတလေ လိုရာမရောက်ဘဲ ဝေ့နေပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်က ကောင်းပါတယ်။ စာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုပြီးမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုတွေ၊ ဒေသခံနစ်နာမှုရှိတာတွေကို ဒေသခံတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဒီစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီမှာ ဒေသခံတွေ သို့မဟုတ် လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေ မပါဘဲ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေပဲ ပါဝင်တာကြောင့် မကျေလည်မှုတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပေါ်လာရင်တော့ အစိုးရမှာပဲ တာဝန်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ပြီး လွန် ကျွံသွားတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အရာရာအားလုံး U – Turn ပြန်လှည့်လို့ မရပါဘူး။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် အစစအရာရာကို ချိန်ဆရပါတယ်။ ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာအတိုင်း အစိုးရက လိုက်လုပ်ပေးရင် ကျေနပ်စရာလို့ မြင်ပါတယ်…
ထို့ကြောင့် ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာတွေ့ရှိသော အားနည်းချက်များကို ပြုပြင်စေကာ နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွား၊ အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက် အကျိုးစီးပွားတို့ကို ပြည့်ဝစွာ ရရှိစေရန်အစီအမံများ ချမှတ်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စေမည့် နည်းလမ်းတွင် မြေသိမ်းဆည်းခံဒေသခံများအား ပေးအပ်ထားသည့် မြေလျော်ကြေးအား ကာလတန်ဖိုးအတိုင်း ပြင်ဆင်၍ ထပ်မံတိုးမြင့်ပေးရန်၊ အချို့နေရာများကို စိုက်ပျိုးမြေအဖြစ် ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် စဉ်းစားလုပ်ဆောင်ပေးရန် စသည့် အချက်များပါဝင်ပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်နှင့် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့၏ စာချုပ်အား ပြန်လည်ပြင်ဆင် ချုပ်ဆိုစေပြီး ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း စိစစ်တင်ပြထားသည်။
”ကော်မရှင်ရဲ့ ဒီစီမံကိန်းအပေါ် အကြံပြုချက်တွေဟာ တစ်ခါတလေ လိုရာမရောက်ဘဲ ဝေ့နေပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်က ကောင်းပါတယ်။ စာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုပြီးမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုတွေ၊ ဒေသခံနစ်နာမှုရှိတာတွေကို ဒေသခံတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဒီစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီမှာ ဒေသခံတွေ သို့မဟုတ် လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေ မပါဘဲ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေပဲ ပါဝင်တာကြောင့် မကျေလည်မှုတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပေါ်လာရင်တော့ အစိုးရမှာပဲ တာဝန်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ပြီး လွန် ကျွံသွားတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အရာရာအားလုံး U – Turn ပြန်လှည့်လို့ မရပါဘူး။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် အစစအရာရာကို ချိန်ဆရပါတယ်။ ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာအတိုင်း အစိုးရက လိုက်လုပ်ပေးရင် ကျေနပ်စရာလို့ မြင်ပါတယ်” ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဖြစ်သူ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က ပြောကြားပါသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အစီအရင်ခံစာမှ ကောက်နှုတ်ချက်အချို့
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ
– ဒုန်းတောကျေးရွာနေ နေအိမ်ဝင်းတစ်ခုအတွင်းရှိ အ၀ီစိတွင်း (သို့မဟုတ်) ပြွန်စိုက်တွင်းတစ်ခု၌ အတောင် ၆၀ အနက်မှ ရေစုပ်စက်ဖြင့် စုပ်တင်ယူထားသော မြေအောက်ရေကို လေ့လာကြည့် သောအခါ ထိုရေကို တိုက်ရိုက် သောက်သုံး၍ မရဘဲ ကွန်ကရစ်စည်ပိုင်းများဖြင့် နှစ်ဆင့်ခံပြီးမှသာ သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း၊ ရေ၏ အရည်အသွေးအနေဖြင့်လည်း အရောင်၊ အနံ့၊ အရသာတို့မှာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အနည်းငယ် ထူးခြားနေကြောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
– တူညီသောအချက်မှာ မြို့သစ်တည်ဆောက်ခွင့်ရသည့် ကန်ထရိုက်တာများ၊ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာများသည် နေအိမ်၊ အဆောက်အဦကို ဆောက်လုပ်စဉ်က အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော (သို့မဟုတ်) စံချိန်မမီသော သစ်နှင့် အခြား အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု အများက မျက်မြင်သက်သေ အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ရွာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည်ဆိုပါက ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် အနည်းဆုံး တစ်အိမ်ထောင် တစ်ယောက်နှုန်းဖြင့် အလုပ်ရမည်ဟု ကတိက၀တ် ပြုထားခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ထိုသို့ မဟုတ်ကြောင်း တင်ပြသူများလည်း ရှိသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
– ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ကံကုန်း ကျေးရွာအနီးရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်၊ မိုးကြိုးဆာလ်ဖျူ ရစ်အက်ဆစ် စက်ရုံသည် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်၏ စက်ရုံဖြစ်ကြောင်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူထားခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဦးပိုင်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် လုပ်ကိုင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက် လက်မှတ် (ISO Certificate) လည်း ရယူထားခြင်း မရှိကြောင်း၊ ကြေးနီမိုင်း၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ် နေ့စဉ် တန် ၅၀ ထွက်ရှိကြောင်း၊ စက်ရုံစီမံကိန်းကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉.၄.၂၀၀၇ ရက် နေ့တွင် စတင်လည်ပတ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ခေါင်းတိုင်သည် မြေပြင်မှ ၁၃၁ ပေမြင့်ပြီး စွန့်ထုတ်သောအငွေ့တွင် ဆာလ်ဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO2) ပါဝင်မှုကို 150ppm ထက်မများစေရန် သတ်မှတ်ထိန်းချုပ် စွန့်ထုတ်ကြောင်း၊ ၂၄ နာရီစဉ် ဆက်မပြတ် လည်ပတ်ရသည့် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုဗေဒပစ္စည်းစက်ရုံ အတန်းအစားအဖြစ် နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားကြောင်း စက်ရုံမှူး၏ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်အရ သိရှိခဲ့ရသည်။
ကွင်းဆင်းအဖွဲ့ တွေ့ရှိခဲ့ရသော အားနည်းချက်များ
– ရွာသစ်များကို စံပြကျေးရွာ အဆင့်မီ တည်ဆောက်ထားမှု မရှိခြင်း
– လျော်ကြေးကိစ္စတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိခြင်း
– သတင်းအချက်အလက် ရရှိရန် အခွင့်အလမ်း အားနည်းသော ရွာသူရွာသားများအား စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သိကောင်းစရာများကို ခေါ်ယူဆွေးနွေး ရှင်းလင်းပြသမှု မရှိခြင်း
– လျော်ကြေးပေးမည့် ဆင့်ခေါ်ကြော်ငြာစာများတွင် မြေယာ/သီးနှံ လျော်ကြေးများဟု ရေးထားပြီး လျော်ကြေးရရှိကြောင်း လက်ဗွေ (သို့မဟုတ်) လက်မှတ်ထိုးရသော ၀န်ခံချက် စာရွက်တွင်မူ လျော်ကြေးငွေ ရရှိကြောင်းနှင့် မြေယာစွန့်လွှတ်ကြောင်း ၀န်ခံချက်ဟု တွေ့ရခြင်း၊
– မြေယာ/သီးနှံ လျော်ကြေး ပေးရာတွင် ယာမြေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေရသော ကျေးလက်နေ ရွာသူ၊ရွာသားများအား ကာလတန်ဖိုးဖြင့် လျော်ကြေးပေးမှုမရှိခြင်း၊
– လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းတွင် လူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု အဆင့်မီ အကဲဖြတ်ခြင်း (SIA) ဆောင်ရွက်ထားမှု မရှိခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
– လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီသတ္ထုတွင်း စီမံကိန်းတွင် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ရေးဆွဲပြုစုထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMP) နှင့် လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် မရှိသေးကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။
– လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် ယနေ့အထိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ကြီးမားစွာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိသေးပါ။ သို့ရာတွင် ကြေးစင်တောင်နှင့် စံပယ်တောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူနေမှုဘ၀ကို ထိခိုက်မှု အတန်အသင့် ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။
– လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် ရှိသင့်ပြီးသော မြေဆီလွှာ ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်၊ ရေအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် နှင့် ဇီ၀၀န်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအား ရေရှည်ဖြစ်ပေါ်စေမှုနှင့် စနစ်တကျ ကျင့်သုံးနေမှုများကို မတွေ့ရှိကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။
– လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီသတ္တုတွင်း စီမံကိန်းနယ်မြေ၏ သက်ရှိဂေဟစနစ်သည် မျက်မှောက်ကာလတွင် အရည် အသွေးကျဆင်းမှု၊ ယိုယွင်းပျက်စီးမှု ကြီးကြီးမားမား မရှိသေးသော်လည်း ကြေးနီသတ္တုတူးဖော် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ သတ္တုသန့်စင်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို ရှေ့တွင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ ယင်းနယ်မြေရှိ သစ်ပင်သစ်တော၊ သက်ရှိ သတ္တ၀ါ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ရေ၊ မြေ တို့ကို ဧကန်မုချ ပြောင်းလဲကာ သိသာထင်ရှားသော ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ရပ်ကို လုပ်ငန်းမစမီကပင် ပြင်ဆင်၍ ကျင့်သုံးသင့်သည်ဟု သုံးသပ် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကြေးနီစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူလူထုနှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် အကျိုးရှိ/မရှိ
– လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် နိုင်ငံခြားသားဦးရေ များပြားပြီး ဒေသခံတို့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဒေသခံ ပြည်သူတို့သည် လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူများဖြစ်ပြီး လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော လယ် ယာမြေများကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရာ မိရိုးဖလာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
– ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် မြေသိမ်းဆည်းခံထားရသော ဒေသခံလူထုအတွက် ပေးအပ်သော မြေလျော်ကြေးတို့သည် ကာလတန်ဖိုးထက်များစွာ လျော့နည်းနေရာ ကာလတန်ဖိုးအတိုင်း ပြင်ဆင်၍ ထပ်မံတိုးပေးရန်။
မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများအပေါ် ဒေသခံပြည်သူများအတွက် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးမှုများနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ
– မြေနှင့် သီးနှံ လျော်ကြေးပေးအပ်မှု အခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ပါက လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် မြေနှင့်သီးနှံ လျော်ကြေးပေးအပ်မှု ကာလတန်ဖိုးဖြင့် မြေလျော်ကြေး မပေးခဲ့သဖြင့် မြေလျော်ကြေးပေးအပ်မှုမှာ အလွန်နည်းပါးနေကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။
– အမှန်တကယ် စိုက်ပျိုးထားသော လယ်မြေ ၃၉.၉ ဧက၊ ယာမြေ ၅၀၁၇.၁ ဧကနှင့် ဦးပိုင်မပေါက်သော်လည်း စိုက်ပျိုးထားမြေ ၁၇၂၇ ဧက စုစုပေါင်း ၆၇၈၄ ဧကကို သင့်တော်သော ကာလပေါက်ဈေးနှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ပေးသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။
မီးခိုးဗုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ
– မီးခိုးဗုံးပေါက်ကွဲရာ ၈ မီတာ အတွင်းတွင် လောင်ကျွမ်းလွယ်သည့် အရာများ ဥပမာ- ပိုလီယက်စတာ အ၀တ်စများ၊ ပလတ်စတစ် မိုးကာစများနှင့် မြွေရေခွံအိတ်များရှိပါက ရေစိုသည်ဖြစ်စေ၊ မစိုသည်ဖြစ်စေ ပေါက်ကွဲသည့်အရှိန်ကြောင့် မီးစုံးစများ ထိမှန်ပါက မီးလောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
– မီးခိုးဗုံး အများအပြား အသုံး ပြုခဲ့လျင်သော်လည်းကောင်း၊ မီးလောင်လွယ်သည့် ပစ္စည်းများ၊ အ၀တ်အစားများ ၈ မီတာအတွင်း ရှိခဲ့လျင်သော်လည်းကောင်း မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
– မီးခိုးဗုံးအများအပြားကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အသုံးပြုပါက မီး တောက်မီးလျံများ ကြီးမားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လောင်စာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ပြင်းထန်ကြာမြင့်စွာ လောင်ကျွမ်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
– လူစုလူဝေးခွဲရာတွင် သုံးစွဲရန် ရည်ရွယ်သည့် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ကြိုတင်စမ်းသပ်ပြီး ထိခိုက်မှု၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အန္တရာယ် မည်သို့ရှိသည်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့များက ကြိုတင်စမ်းသပ် လေ့လာသင့်သည်။ ထို့အပြင် လိုအပ်လျင် လိုအပ်သလို ပြည်တွင်းတွင်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အကူအညီ များ ရယူပြီး ပြည်ပသို့ စေလွှတ်၍လည်းကောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားစေသင့်ကြောင်း အကြံပြု တင်ပြအပ်ပါသည်။
– မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းမှု လေ့ကျင့်ခြင်းကို မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် လက်ပတောင်း ဒေသခံများ ဆွေးနွေးခြင်း
ဒေသခံတစ်ဦး။ ။အမေ၊ သမီးတို့က လက်ပံတောင်းတောင်အတွက် အနစ် နာခံပြီး လုပ်နေတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။လက်ပံတောင်းတောင်အတွက် အနစ်နာမခံဘဲ နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက် အနစ်နာခံပါ။
ဒေသခံတစ်ဦး။ ။ဒေသခံတွေက ဒီတောင်ကြီးကိုပဲ ခင်တွယ်တာ အဓိကပဲလေ။ ကျန်တာတွေ ဘာမှမလိုချင်ဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ဒါတော့ အမေမတတ်နိုင်ဘူး။ အမေကတော့ တောင်ထက် လူတွေကို ပိုချစ်တယ်။ လူတွေရဲ့ အနာဂတ် ကိုပိုချစ်တယ်။
ဒေသခံတစ်ဦး။ ။ကျွန်မတို့ဒေသခံတွေက အမေရဲ့အဖြေကို စောင့်စားခဲ့တာ။ ကျွန်မတို့ ကလေးဘဝတုန်းက အမေများ မုံရွာသွား လို့ ပြန်လာရင် မုန့်တွေပါလာမယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။ အခုလဲ အမေစုရဲ့အဖြေကို ကောင်းတာလေးဖြစ်အောင် မျှော်လင့်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ကိုယ်လိုချင်တဲ့အဖြေရမှ ကောင်းတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ မထားရဘူး။
ဒေသခံတစ်ဦး။ ။ကျွန်မတို့က အဲ့လိုမျှော်လင့်ထားတာ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။သမီးတို့က ဘယ်လိုလဲဆိုတာ့ အမေပြန်လာလို့ စာအုပ်ဝယ်လာပြီး မုန့်မဝယ်လာသလိုဖြစ်သွားတာ။ စာအုပ်က ရေရှည်အတွက် အဖိုးတန်တယ်” မုန့်ကခဏပဲ။
အလဲ့ .. ဘုန်းကြီးကလည်း နုထှာ ..ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင် ဆိုပဲ …
၁၉၉၀တ၀ိုက်က စိတ္တဇ ဆန်တဲ့ ရူပက အလင်္ကာတွေ ခေါင်းထောင်ခဲ့ဖူးတယ်
ဆိုလား ဖတ်ဖူးရဲ့ .. ကိုရင်ဂိုရဲ့ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင် စီးရီးစ် တိုင်တယ် ဟာလည်း
တခုအပါအ၀င်ပေါ့ ..ဘာတဲ့ .. အိပ်မက်ကုန်သည် တို့ ပျားရည်မြစ် တို့
ဆိုတာတွေလည်း နာမည်ကြီး သပေါ့စ်…
အရက်မကောင်းကြောင်းကို ၀ါတော်၄၀ သိက္ခာတော်ရ ဆြာတော်ထက်
အရက်သမား အစစ် က ပိုသိ ပိုနားလည် မှာ ဖြစ်တယ် လို့ အဆိုရှိလေတော့
လက်ပံတောင်းတောင် အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံ..
မျှဝေ တဲ့ pdf လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ သူကြီးရေ။
ကျွန်မ လဲ ဆက်မျှလိုက်ဦးမယ်။
ရှောင်ကာ ရှားလို့သွားသင့်တယ်။ ။
ပုံ။ပညာရှိ ဆြာ သံချောင်း။
အဘဖော ဝေါ်လ်ပေါ်မှာ ရှဲထားတာလေး တွေ့လို့ မ-လာပါဂျောင်း..
မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးအတွက် ၀မ်းသာစရာသတင်းတစ်ခု ဖတ်ရပါတယ်….။
အမေရိကန်အခြေစိုက် နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Frontiir ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ တက္ကသိုလ်နယ်မြေအချို့ကို University Digital Network (UniNet) စနစ်နဲ့ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု စတင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနည်းပညာဟာ ကျောင်းပရ၀ုဏ်တစ်ခုအတွင်းမှာသော်လည်းကောင်း၊ တက္ကသိုလ်နယ်မြေအချင်းချင်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ ၄င်းတက္ကသိုလ်များနဲ့ ကမ္ဘာ့ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုသော်လည်းကောင်း ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်..။
(UniNet)ပထမအဆင့်မှာ (၁) UCSY(ဗဟန်း)ရဲ့ ၁၀ဧကကျယ်ကျောင်းနယ်မြေအတွင်း စာသင်ခန်းတွင်းနဲ့ အခန်းပြင်ပနေရာတွေမှာ Wifi ထုတ်လွှင့်ပေးခြင်း၊ (၂) IT အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း (၃) UCSY (Bahan), ICTTI (Hlaing) နဲ့ YTU ကျောင်းများအချင်းချင်း မြန်နှုန်းမြင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက် ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ပါဝင်တယ်။
တဆက်တည်း အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာကျော် MIT နည်းပညာတက္ကသိုလ်နဲ့ YTU တို့ကြား သင်ကြားရေးကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်..။
Russia unmoved by US missile defence shift
Vladimir Radyuhin MOSCOW, March 18, 2013
US Defence Secretary Chuck Hagel speaks atanews conference on March 15, 2013 announcing that the Obama administration will add 14 interceptors toaWest Coast-based U.S.-based missile defense system reflecting concern about North Korea’s focus on developing nuclear weapons and its advances in long-range missile technology.
AP US Defence Secretary Chuck Hagel speaks atanews conference on March 15, 2013 announcing that the Obama administration will add 14 interceptors toaWest Coast-based U.S.-based missile defense system reflecting concern about North Korea’s focus on developing nuclear weapons and its advances in long-range missile technology.
The Pentagon’s decision to shift the focus of its global missile defence from Europe to Asia has failed to shake Russia’s adamant opposition to the U.S. plans.
A top Russian diplomat said the scrapping of the final phase of the U.S. missile shield for Europe announced by newly appointed U.S. Defence Secretary Chuck Hagel did not address Russia’s concerns.
“This is notaconcession to Russia and we do not see it as such,” Russia’s Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov told the Kommersant daily on Monday.
Mr Hagel said Friday that the U.S. planned to cancel the fourth phase of the European missile defence system, which called for the deployment from 2018 of more powerful missile interceptors near Russia’s borders. Moscow claimed the interceptors would have the capability to shoot down Russian intercontinental ballistic missiles.
Instead thhe U.S. now intends to put additional ground-based interceptors in Alaska to deal withapotential threat from North Korea.
The Pentagon insists the proposed change in missile defence plans has nothing to do with Russia’s objections, but U.S. analysts said the move “has opened the door” to new arms control talks with Moscow.
However, Moscow does not think the shift in U.S. missile defence plans would reduce potential risks to Russia. For one thing, Mr Ryabkov pointed out, the U.S. is still going ahead with the deployment of land-based and ship-borne mobile interceptors in Europe, which posedathreat to Russia.
Secondly, the deployment of extra U.S. interceptors in Alaska would “significantly expand U.S. capabilities in the sphere of missile defences,” according to Mr Ryabkov.
“Our objections remain,” the Russian diplomat said ahead of his meeting Tuesday in Geneva with U.S. Assistant Secretary of State Rose Gottemoeller to discuss the issue.
Russian experts said the U.S. plans to set up additional 14 missile interceptors on its Pacific Coast on top of 30 interceptors already deployed in Alaska and California were really aimed at China, not North Korea.
“The missile defences the U.S. is building in the Pacific will be capable of interceptingaretaliatory strike from China, which has 50 to 75 intercontinental ballistic missiles,” said Academician Sergei Rogov of the Institute of U.S. and Canada.
The fact that Moscow articulated its strong objections to the U.S. missile defence “pivot” to Asia two days ahead ofavisit by new Chinese leader Xi Jinping’s state visit to Russia is another indication of stronger political bonds between the two countries.
မတ္ထီလာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ပါ..
၂၀-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၉၃၀ အချိန် မိတ်္ထီလာမြို့၊ ဈေးအရှေ့ပြင်ရပ်ရှိ ““နယူးဝိန့်စိန်”” ရွှေဆိုင်သို့ မိတ်္ထီလာမြို့နယ်၊ ပြွန်ကောက်ရွာနေ လေထိုးကျွတ်ဖာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ဦးခင်မောင်ဝင်း (၄၅)နှစ်၊ ၎င်း၏ဇနီး ဒေါ်အေးနိုင်(၄၆)နှစ်နှင့် မညိုညိုသန်း(၃၆)နှစ်တို့ ၃ဦးမှ ငွေလိုအပ်သဖြင့် ငွေကျပ်(၁၄၀၀၀၀ိ/-)ခန့်တန်ဘိုးရှိ ရွှေဆံညှပ်တစ်ခုအား သွားရောက်ရောင်းချရာ ဆိုင်ရှင် ဒေါ်တင်အေး၏သမက်ထွန်းထွန်းဦး(ခ)အာရှစ်(၂၃)နှစ်မှ ငွေကျပ်(၁၀၅၀၀၀ိ/-)သာပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြား၍ မှတ်ကျောက်တင်ရန် ဈေးအတွင်းသို့ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဆိုင်သို့ပြန်ရောက်စဉ် ရွှေဆံထိုးမှာပဲ့နေသဖြင့် ထွန်းထွန်းဦး(ခ)အာရှစ်မှ တန်ဘိုးငွေကျပ်(၅၀၀၀၀ိ/-)သာ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရာမှ နှစ်ဖက်အချင်းများကာ ဆိုင်ရှင် မမြင့်မြင့်အေးက ရွှေဆံညှပ်အား လွှင့်ပစ်ပြီး ထွန်းထွန်းဦး(ခ)အာရှစ်နှင့် ဆိုင်လုပ်သား ညီညီ(ခ)မင်းအောင်တို့မှ ဦးခင်မောင်ဝင်းအား လက်သီးဖြင့်ထိုး/သစ်သားတုတ်နှင့်ရိုက်၍ ဦးခင်မောင်ဝင်းတွင် ဦးခေါင်းဝဲဘက်ချိုစောင်းပေါက်ပြဲ၊ မျက်နှာဖူးရောင်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သဖြင့် မိတ်္ထီလာဆေးရုံသို့ တင်ပို့ကုသခဲ့ကာ ဦးခင်မောင်ဝင်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်အေးနိုင်မှ တိုင်တန်းသဖြင့် ထွန်းထွန်းဦး(ခ)အာရှစ်၊ ညီညီ(ခ)မင်းအောင်နှင့် မြင့်မြင့်အေးတို့ ၃ ဦးအား မိတ်္ထီလာအမှတ်(၂)ရဲစခန်း (ပ)၇၄/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၂၆/၂၉၄/ ၄၂၇/၁၁၄ ဖြင့် ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့သည်။
၎င်းဖြစ်စဉ်အားကြားသိသော လူ(၂၀၀)ခန့်က ၁၄၁၅ အချိန်တွင် ထွန်းထွန်းဦး(ခ)အာရှစ်၏ ဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဈေးအရှေ့ဘက်တိုက်(၃)လုံး၌ရှိသော ဆိုင်ခန်း(၆)ခန်းအား ခဲဖြင့်ထု၊ ဆိုင်အတွင်း ၀င်၍ ပစ္စည်းများရိုက်ခွဲခဲ့သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရဟန်းသံဃာများနှင့် ရပ်မိ ရပ်ဖများမှ လူစုခွဲတားဆီးခဲ့ကြောင်း၊ ၁၄၃၀ အချိန်တွင် အဆောက်အဦဖျက်ဆီးမှုများ ရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီး လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါဆိုင်ခန်း(၆)ခန်း ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း၊ ၁၅၁၀ အချိန်တွင် ၎င်းင်းလူအုပ်စုမှ အဆိုပါတိုက်(၃)လုံးအား ဆက်လက်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိသဖြင့် မိတ်္ထီလာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးစီးသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြင့် လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ၁၇၁၅ အချိန်တွင် ဈေးအနောက်ဘက်ရှိ ပါကစ္စတန်ဂျာမေ့ဗလီအား လူ(၅၀)ဦးခန့် ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၇၂၀ အချိန်တွင် လူအင်အား(၁၀၀)ခန့် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် ဗလီအတွင်းရှိပစ္စည်းများအား ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ၁၇၂၅ အချိန်တွင် ဗလီထိပ်ဖူးများအား ဖျက်ဆီးကာ ဆိုင်ကယ်(၅)စီးခန့်အား ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။
၁၇၃၅ အချိန်တွင် အဆိုပါဗလီအား မီးရှို့ခဲ့ရာ လူထုမှ ၀ိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ်ခဲ့သဖြင့် ၁၇၃၅ အချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့သည်။ ၁၇၄၅ အချိန်တွင် အဆိုပါလူအုပ်သည် ဗလီအတွင်းမှ ထွက်လာခဲ့ပြီး လူ(၂၀၀)ခန့်သည် ကားလမ်းမအတိုင်း ကားကြီးဝန်းထိပ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့၊ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အများပြည်သူလက်ဝယ် လှည့်လည်သုံးစွဲလျက်ရှိသည့် FEC ယူနစ်ပေါင်း ၃၀ ဒသမ ၉၂ သန်းကျော်ကို တန်ဖိုးညီမျှသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ (သို့မဟုတ်)မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လဲလှယ်ပေးမည့် အစီအစဉ်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က မတ် ၂၀ ရက် တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။
အဲဒီသတင်းထွက်တာနဲ့ FEC ဈေးက ဒီနေ့ကျသွားပြီ။ :eee:
ဆည်ဆောက်.. လျှပ်စစ်ထုတ်တာကို.. ကန့်ကွက်/ထောက်ခံသူတွေ.. တက်နားထောင်ဆွေးနွေးသင့်တဲ့.. ပညာရှင်ဆွေးနွေးပွဲပါ..။ မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့တက်သင့်ကြောင်း..။
The 17th Annual NCAC Washington Energy Policy Conference
The National Capital Area Chapter of the U.S. Association for Energy Economics
The Energy and National Security Program, Center for Strategic and International Studies
The availability of clean and reliable water resources isacritical issue across the North America and throughout the world. Electricity production is the second largest consumer of water in the United States, after agriculture. This year’s conference will examine the energy-water nexus withaspecific focus on water management issues relative to electric power generation.
This one-day conference will feature experts to discuss some of the most central issues related to water and electricity use: the technological opportunities and financial challenges of; the regulatory and environmental outlooks; and insights into the regional U.S. and international dynamics.
• Alicia Aponte, Global Strategic Intelligence, GE
• Richard Bozek, Director of Environmental Policy, EEI
• Nicole Carter, Specialist in Natural Resources Policy, CRS
• Vlad Dorjets, Lead Industry Economist, U.S. EIA
• Paul Faeth, Director of Energy, Water and Climate, IPR, CNA Corp.
• Travis Fisher, Economist, Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
• Ben Grumbles, President, U.S. Water Alliance
• David Hunter, Manager of Federal and Industry Affairs, EPRI
• Josh Johnson, Professional Staff Member, U.S. Senate Energy Committee
• Jordan Macknick, Energy and Environmental Analyst, NREL
• Jim Richenderfer, Director of Technical Programs, SRBC
: NCAC Members: $150
*Annual membership to the NCAC-USAEE is $20. Student membership is $10.
Registration required. Please register at http://www.ncac-usaee.org/events.php.
Space is limited; registration will be open until April 5th or until capacity is reached.
မြန်မာများ ကြားညပ်နေသလားလို့.. စိစစ်ကြည့်တော့.. မြန်မာက.. အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုပါဆွဲသွင်းနေတော့တာကိုး..
Ananth Krishnan BEIJING, March 21, 2013
Google ဥက္ကဌ Eric Schmidt သည် ယနေ့ (၂၂-၃-၁၃)ရက်နေ၌ ရန်ကုန်ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင် ကျောင်းသားများကို မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်..။
၄င်းက မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းသွားပါတယ်..။ ဒီနေရာမှာ ပြိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရှိဖို့နဲ့ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိဖို့ အရေးကြီးကြောင်းလည်း ပြောသွားပါတယ်..။
အစိုးရအနေနဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်မထားဖို့နဲ့ ပြည်သူတွေကို ပိုမိုပြောဆိုခွင့်ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစီးပွားရေး လမ်းဖွင့်ပေးမှုတွေကို အင်တာနက်က ပိုမိုခိုင်မြဲစေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အင်တာနက်ကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေ နောက်ကြောင်းပြန်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်..။
Google အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို သတင်းအချက်အလက်တွေ ပိုမိုရရှိစေဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါတယ်..။
Eric Schmidt သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း၌ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်..။
Google’s Eric Schmidt Heads To Another Isolated Asian Nation
Google’s executive chairman, Eric Schmidt, who went to North Korea in January, is makingashort visit Friday to Myanmar, also known as Burma.
” Google Play မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံး၍ရပြီ ”
မြန်မာနိုင်ငံ အင်တာနက် အသုံးပြုသူများမျှော်လင့်စောင့်စားနေသော Google Play ကို ယနေ့ နံနက်မှစတင်၍ အသုံးပြု၍ရပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဂူးဂဲလ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Eric Schmidt မတ်လ ၂၂ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ အသုံးပြုခွင့် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Mr. Eric Schmidt မလာမီ တစ်ရက်အလိုကလည်း Google.com.mm ဒိုမိန်းနှင့် အသုံးပြုခွင့်ရခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ယင်းသတင်း ပတ်သက်ပြီး အန်းဒရွိုက်စနစ်သုံး ဂူးဂဲလ်အယ်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးက ” အရမ်းမိုက်ပါတယ်ဗျ၊ အရင်က ကျနော်တို့ အယ်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုအသုံးပြုချင်ဆို Google Play က ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနှင့် သုံးမရတော့ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး၊ ဒီမနက်မှာတော့ ကျွန်တော် ဖုန်းနဲ့ စမ်းသုံးကြည့်တော့ သုံးလို့ရတာတွေ့ရပါတယ် ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ပြီးတော့ တခါ “ဒီဘာသာတရားတွေကို တည်ထောင်ခဲ့တယ်၊ God တို့၊ အမ်လာတို့၊ ရဟူးတို့၊ ဗြာဟ္မာတို့၊ ဗိရှနှိုးတို့၊ ရှီဝတို့၊ ဒို့ဘက်ကပြောရင် ဗုဒ္ဓတို့ သူတို့တတွေဟာ သစ္စာတရားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပေါ်လာတာပဲ”လို့ အကုန်လုံး တကမ္ဘာလုံးက ပညာရှိတိုင်းက ယုံကြည်လက်ခံထားကြတယ်။ အဲဒါကို ယုံကြည်လက်ခံထားသည့်အားလျှော်စွာ ဒီဘာသာတရားတွေကို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဒီလိုတွေဟာ သစ္စာတရားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကုန်လုံး ၀ိုင်းဝန်း တည်ဆောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ သစ္စာတရားကို ဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ အမှန်တရားကို ဖယ်ရှား၊ မတရားတွေ၊ အဓမ္မ၀ါဒတွေ အဓမ္မကျင့်သုံးမှုတွေကို ကျင့်သုံးပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို နှောက်ယှက်ကြမည်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘာသာဝင်ကိုမဆို ဘယ်ဘုရားကမှ ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒါကြောင့် “နှစ်ပေါင်း ရာဂဏန်းလောက်သာ ရှိသေးတဲ့၊ မြန်မာမြေပေါ်ကို ရောက်လာကြတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ပြေပြေပြစ်ပြစ်၊ ချစ်ချစ် ခင်ခင် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ နေဖို့ ကောင်းတယ်။” ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ဒီနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ပြီ၊ သူတို့တတွေက ရာလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်၊ အဲဒါကြောင့် အိမ်သည်တွေနဲ့ ဧည့်သည်တွေဟာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ ညီညီညွတ်ညွတ် ရှိဖို့ကောင်းတယ်။
Security Message to United States Citizens (updated March 26, 2013)
U.S. Citizens Strongly Advised to Avoid the Mingalar Market/Yuzana Plaza Area in Rangoon
The communal violence in Mandalay region over the last week has resulted in strong feelings on many sides. While there are no known specific threats against U.S. citizens, you are strongly advised to avoid the Mingalar Market/Yuzana Plaza area east of Kandawgyi Lake in Rangoon. A fight broke out in that area today asaresult of ongoing tensions, resulting inaheavy police presence. Many shops have closed.
While in public areas, stay alert and aware of the people around you at all times. Stay clear of all demonstrations or public gatherings. If you see something suspicious, report it to local authorities if possible and leave the area. Even demonstrations that are meant to be peaceful can become violent and unpredictable.
We strongly recommend that U.S. citizens traveling to or residing in Burma enroll in the Department of State’s Smart Traveler Enrollment Program (STEP) at https://step.state.gov/step. STEP enrollment gives you the latest security updates, and makes it easier for the U.S. embassy or nearest U.S. consulate to contact you in an emergency. If you don’t have Internet access, enroll directly with the nearest U.S. embassy or consulate.
Regularly monitor the State Department’s website at http://travel.state.gov, where you can find current Travel Warnings, Travel Alerts, and the Worldwide Caution. Read the Country Specific Information for Burma at http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_4965.html. For additional information, refer to “A Safe Trip Abroad” on the State Department’s website.
Contact the U.S. Embassy for up-to-date information on travel restrictions. You can also call 1-888-407-4747 toll-free from within the United States and Canada, or 1-202-501-4444 from other countries. These numbers are available from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. Eastern Time, Monday through Friday (except U.S. federal holidays). Follow us on Twitter at https://mobile.twitter.com/travelgov and Facebook at https://www.facebook.com/travelgov, and
The U.S. Embassy in Rangoon is located at 110 University Avenue, Kamayut Township, and is open from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. M-F. The Embassy Telephone is (95)-(1)-536-509. If you areaU.S. citizen in need of urgent assistance, the emergency number for the U.S. Embassy is (95)-(9)-512-4330. If calling the 24 Hour Embassy Telephone, explain that you want to speak to the Duty Officer oraConsular Officer.
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဘာသာ/လူမျိုး/နိုင်ငံရေးနှင့် တိုင်းပြည်အပေါ်ထားသည့် သာတူညီမျှစိတ်ဓာတ်(………..ထိုညီလာခံတွင်ပင် ဘာသာရေးကိုင်းရှိူင်းသည့် ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုက လွတ်လပ်ရေးရသည့်အခါတွင် ဗုဒ္ဒဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းရန်သင့်ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းသည်။ ဤအဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးကြသည့်အခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အောက်ပါအတိုင်းချေပပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒီးဒုတ်ဂျာနယ် အတွဲ ၂၁၊ နံပတ် ၇၊၄ သြဂုတ်၊ ၁၉၄၇- စာမျက်နှာ ၂၁ မှ)
“… သည်မှာ ဆရာ ၊ ကျွန်တော်တို့က လူကြိုက်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ သည်လို မဟုတ်မဟတ် ကိုယ်ထင်ရာတွေလျှောက်လုပ်နေကြမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ မကြာမီပျက်စီးပြိုကွဲပြီး ကျွန်သားပေါက်ဖြစ်သွားမှာဘဲ။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ အလောင်းဘုရားလက်ထက်ကတည်းက မူဆလင်တွေရှိတယ်။ ဘရင်ဂျီတွေရှိတယ်။ အစတုန်းကရှိလာကြတဲ့ နတ်ကိုးကွယ်တဲ့တောင်တန်းသားတွေရှိတယ်။ အဲသည်တောင်တန်းသားတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တုန်းက တချို့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ပြီး အရိုးစွဲနေကြတာရှိတယ်။ သူတို့တစ်တွေဟာအားလုံးနိုင်ငံသားတွေပဲ၊ တိုင်းပြည်ကို ကျွန်တွင်းကလွတ်အောင်တိုက်ထုတ်ကြတုန်းက ကျွန်တော်တို့ချည်းမဟုတ်ဘူး။ သူတို့တတွေပါကြတယ်။ ယခု ကျွန်တွင်းကလွတ်မည်မကြံသေးဘူး သူတို့တွေအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပြီး ငါတို့လူများစုရဲ့ဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ရမည်လို့ လုပ်လိုက်လျှင်ကျွန်တော်တို့ဟာ ခွေးလောက်တောင်သောက်သုံးမကျတဲ့အကောင်တွေဖြစ်သွားကြမှာပေါ့ဆရာ။ တိုင်းပြည်ကို တိုင်းပြည်ရေးလိုတွေးစမ်းပါ။ ဘာသာရေးတွေ ဘာတွေညာတွေလုပ်မနေစမ်းပါနှင့်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးစည်းလုံးကြဖို့လိုတယ်၊ … ယခုအချိန်မှာလိုချင်တာက ပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိနေကြတဲ့လူမျိုးအားလုံး ဘာသာအားလုံး ဘယ်တော့မှမပြိုကွဲဘဲ ခွဲထွက်သွားမည့်လူတွေပေါ်မလာစေဘဲ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်တစ်ခုတည်း
ရှိအောင်သွင်းပြီးစည်းလုံးဖို့လိုတယ်။ နိုင်ငံတော်ဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်ချင်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်လို့ ဆရာ့ဘာသာဆရာကြေညာ၊ ကျွန်တော် မပါဘူး။”
(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် (ပါလီမန်)တတိယပြည်သူလွှတ်တော်ညီလာခံမှတ်တမ်း၊ စာတွဲ ၅၊ အစည်းအဝေးအမှတ်-၃၊ ရန်ကုန်၊ အစိုးရပုံနှိပ်တိုက်၊၁၉၆၂၊ စာ ၃၇၀- ၃၇၁)ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုတို့ကိုပြောခဲ့ဖူးတဲ့စကားအဖြစ် မှတ်သားဖူးပါတယ်။
ဒီမနက်တင် ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့ ၁၂လရာသီ ပန်းများနှင့် ပွဲတော်များ ပြန်ဖတ်နေတာ..
ရပ်ဆို ဒင်းအကြောင်း ပါလာတာကိုး ..
ကျုပ်တို့မှာတော့ ဒင်းစောင့်တဲ့ သာသနာ ဆိုပီး ဒင်းကို တခုတ်တရ သဒိယလိုက်ရတာ ..
ဒလောက် တိုင်ပတ်နေတာ … ဒင်း က ဘယ်ပျောက်နေတာတုန်း…
မျက်နှာလွဲဂဲပစ်သူယီး … ချဉ်ထှာ …
သဂျန် ကျတော့မှ လုပြည်ဆင်းပီး ဆာဗေးလာကောက်ရဲ ကောက်ကျိ…
ဒင်းကို …မီးဒုတ် ရှို့မယ်… စန္ဒာ ပြပစ်မယ်..
သခ်ျာမတွက်တတ်သူတွေက.. သင်္ချာနားမလည်သူတွေကို.. နှပ်ချနေတယ်မှတ်ပါ..။
မယုံရင်.. လွန်ခဲ့တဲ့.. ၂နှစ်က ကျုပ်စာလေးပြန်ဖတ်ပြီး.. ကယ်ကူလိတ်တာလေးနဲ့.. တွက်ကြည့်..။
သိကြားမင်း အော်ရီဂျင်နယ်မူပိုင်က ..ဟိန္ဒူတွေပါ..။
နတ်ပြည်အော်ရီဂျင်နယ် မူပိုင်လည်း သူတို့ပဲ…။
နတ်ပြည်နဲ့ လူပြည် သက်တန်းကွာတယ်ပြောတာလည်း သူတို့ပဲ..။
သိကြားမင်းက သာဝတိံသာမှာနေတာ..။ သူတရက်က.. လူအနှစ်ပေါင်းဘယ်နှရာလည်းတောင် မသိဘူး..။ စတုမဟာရာဇ်တရက်= လူပြည်နှစ်၁၀၀ လို့တော့ထင်တယ်..။
ဆိုလိုတာက… လူ့ပြည်နှစ်ကူး ၁ နှစ်မှာ တရက် လူုပြည် သိကြားမင်းဆင်းရင်ကို .. ဟိုမှာ(သာဝတိံသာ) မိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိဦးမှာ..။
တနှစ်တခါဆင်းတဲ့အဓိပါယ်က.. သာဝတိံသာမှာ သိကြားမင်း.. သူ့မိဘုရား ပါးလေးတောင် နမ်းရ-ကိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူး..။ လူ့ပြည်ပြန်ပြန်ဆင်းနေရမှာ…။
တခုခုကတော့ ..အသေအချာလွဲနေတာပဲ..။ သိကြားမင်းလား..။ နတ်ပြည်လား.. ပဲ..။
ဒ်မှမဟုတ်… တနှစ်တခါသင်္ကြန်လုပ်..သိကြားမင်းစောင့်တဲ့သူတွေ.. သူများလင်မယားကြား ၀င်ရှုပ်မှုနဲ့ အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပဲ..။
ရှေးလူကြီးတွေများ ..စတိုရီတဲလ်လင်း တယ်ကောင်းသကိုးဗျာ…။
တဖက် ၄-၅ရာ ကိုတောင် အားမရလို့ ..ဗျိုင်း မလေး တရာဟော
အိုးထိန်းသယ်ဖြစ် အိုးထိန်းသယ်ကနေ ရွှေတွေပေး အလှူတွေလုပ်ခိုင်းရင်း
နတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ပေါင်းသေးတာရယ် ဆိုလား ..
သိကြားပြည်၁ရက်ကို လူ့ပြည်နှစ် ၁၀၀ လို့ ပဲ assume လုပ်ပြီး တွက်ကျိရင်တောင်…
၄မိနစ်တခါလောက် ဆင်းနေရတဲ့ကြားထဲကမှ ဖွန်ကကြောင်နိုင်သေးတယ်…
အော်.. သိကြားတို့များ..ဒါတောင် မယ်လမု ပါသေးတယ်..
အဲ… မယ်လမု ဆိုလို့…
စကားမစပ် ဒီတခါ ..
သိကြားမင်းက လဒစီးပြီး မီးဒုတ်ကိုင် ဆင်းတယ်ထင်တယ်..
လဒ ကို ဘု၇ားပေါ်မှာတွေ့ပီး
မီးဒုတ်ကတော့ အလယ်ပိုင်း ကိုကျ သွားတယ်ထင်ပ..
အသက်ကြီးလာတဲ့.. အဖိုးအဖွား..မိဘတွေ.. မြန်မြန်သေစေချင်ရင်.. လူမှုဆက်ဆံရေးတွေမလုပ်စေပဲ.. သီးသန့်လေးထားလိုက်..
ဗြိတိသျှတွေ ရီဆတ်ခ်ျလုပ်ပြီးပြောတာနော..။ :harr:
UPI.com	– ‎2 hours ago‎
LONDON, March 27 (UPI) — People age 52 and older who are socially isolated are at higher risk of dying, than those not socially isolated, British researchers say.
ဒီကနေပဲ မေးလိုက်တော့မယ်။ သူကြီးအသိမိတ်ဆွေတွေထဲ ရန်ကုန်မှာ ကွန်ဒိုအခန်းဝယ်ချင်၊ ငှားချင်နေတဲ့ မြန်မာ၊ နိုင်ငံခြားသားများရှိလားလို့။
မေးတဲ့သူတွေကို ချိပ်ပေးမယ်..။ ပွဲခပေး..
၂ခုရှိတဲ့ထဲက တစ်ခုကိုအရင်ပြမယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကို အသေးစိတ်နောက်မှရိုက်နိုင်မယ်။ အခုထိ အခန်းတွင်းပြင်ဆင်မှုလုပ်နေသေးတာမို့။ ငှားမယ်။ တစ်ဝက်ပေးမယ်လေး-) http://www.expat-blog.com/en/housing/asia/myanmar/40-flats-for-rent/176234-quality-apartment-for-rent.html
Toledo Blade	– ‎1 hour ago‎
Christian worshippers carryacross towards the Church of the Holy Sepulcher, traditionally believed by many to be the site of the crucifixion of Jesus Christ, during the Good Friday procession in Jerusalem’s Old City.
လူတော်တော်များများ စနစ်တကျ ပြုတ်တတ်တယ်မထင်ပါဘူး..။
Hard-Boiled Eggs: Why You Are Cooking Them Wrong
By Sarah B. Weir, Yahoo! blogger | Team Mom
”But they can learn to respect each other’s different beliefs and actually come to get along and even like one another.”
စကော့တလန် က သတင်းတပုဒ်ပါ။
အရမ်းအေးတဲ့အချိန် ဗလီထဲမှာ လူမဆန့်လို့ အပြင်မှာ ဝတ်ပြုနေရတဲ့ သူတွေ ကို Church ထဲ ဝင်ပြီး ဝတ်ပြုခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်း ကို ဖတ်ရတဲ့ အချိန် စိတ်ထဲမှာ နွေးထွေးမှု လေးတစ်ခု ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
ဒါဟာ မေတ္တာအကြောင်းတစ်ခု ကနေ ရလိုက်တဲ့ ပီတိပါ။
ကမ္ဘာကြီးမှာ နေခိုက်ရတဲ့ အချိန်လေး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘာလို့ အမုန်းတွေပွါးနေရတာလဲ။
သူတို့က ရိုင်းလို့ ဆိုရင်လဲ အဲဒီ သူတွေကို ကိုယ်ကစပြီး မေတ္တာပေးကြည့် လိုက်ရင် သူတို့ ဆီကလဲ မေတ္တာပြန်ရနိုင်ပါတယ်။
လောကကြီးကို ကိုယ်တစ်ကိုယ်ကောင်း လက်ဝါးကြီးအုပ် ဖို့ကြိုးစားရင် ကိုယ့်မှာလဲ အေးချမ်းမှု ဘယ်တော့မှမရပါဘူး။
တကယ်ဘဲ အကောင်းဆုံးအခြေအနေ ကို လိုချင်ရင် ကိုယ်ကစပြီး မေတ္တာပေးကြည့်ဖို့ လိုပါတယ် မဟုတ်လား။
မိတ္ထီလာမှာလည်း.. ဆရာတော်တပါး.. ထွက်ပြေးလာတဲ့.. မြန်မာ-မွတ်ဆလင်တွေရာချီပြီးတော့ကို..သူ့ကျောင်းထဲခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့တယ်..
သတ်မယ်လာတဲ့သူတွေကို.. သူ့အရင်သတ်ပြီးမှ.. သတ်ပါလို့ကို ပြောပစ်ခဲ့တာ..
တကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်.. အဲဒီ ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်ကို.. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆုပေးဖို့ကောင်းတယ်..။
မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် လျှောက်ထား မှုတွင် ဖြေလျှော့မှုများ ပြုလုပ်ပေး ခဲ့မှုကြောင့် လျှောက်ထားရမည့် လျှောက်လွှာ ပုံစံများနှင့် ပတ်သက်၍ အများသိစေရန် သတင်းထုတ်ပြန်
နေပြည်တော် မတ် ၁၉
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးက ယနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် လျှောက်ထားရာ၌ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန် သက်သာမှုများ ရရှိစေရန်နှင့် စနစ် ကျနမှု ရှိစေရန်အတွက် ဖြေလျှော့မှုများ ပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် လျှောက်ထားရာ၌ မြန်မာ နိုင်ငံနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံ များနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်က ဖြည့်စွက် လျှောက်ထားရသည့် လျှောက်လွှာပုံစံ ၁၄ ရွက် ရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်း ၁၄ ရွက်မှာ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းရန် ပုံစံ (၂ စုံ) နှစ်ရွက် (လေးမျက်နှာ)၊ ကွန်ပျူတာ လျှောက်လွှာပုံစံ (၅ စုံ) ငါးရွက်၊ အလယ်လျှောက်လွှာပုံစံ (အပြာရောင်) တစ်ရွက်၊ ကိုယ်တိုင်ရေး လျှောက်လွှာ ပုံစံ နှစ်ရွက်၊ ပညာရေး ကင်းရှင်းကြောင်း ကိုယ်တိုင်ခံဝန် နှစ်ရွက်၊ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ကိုယ်တိုင် ခံဝန် နှစ်ရွက် စုစုပေါင်း ၁၄ ရွက် ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် လျှောက်ထားမှုတွင် ဖြေလျှော့မှုများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့မှုကြောင့် လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ငါးရွက် ဖြည့်သွင်း လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ထပ်မံ ဖြေလျှော့၍ (၃) ရွက်တည်း သာ ဖြည့်စွက် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။ ယင်း သုံးရွက်မှာ ကိုယ်ရေး မှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းရန် ပုံစံ (၂ စုံ)၊ နှစ်ရွက် (လေးမျက်နှာ)၊ ကွန်ပျူတာ လျှောက်လွှာပုံစံ (၁ စုံ) တစ်ရွက် စုစုပေါင်း သုံးရွက် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံ သုံးရွက်ကိုလည်း လျှောက်ထားသူများ ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ရိုးရှင်း လွယ်ကူသော စနစ်များဖြင့် စာရွက်စာတမ်းများကြောင့် ကြန့်ကြာခြင်း မဖြစ်စေရန် စီမံထားရှိကြောင်း ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
Congress က ကော့မန့်ရေးမရလို့ ဒီမှာ လာရေးသွားပါတယ်နော် ။
သဂျီး ငွေလွှဲတဲ့အကြောင်းကြားစာလည်းရထားပြီးပါပြီ ။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ် … ဒါပေမယ် .. ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေက နည်းနည်းပြေးလွှားနေရတဲ့ အလုပ်ကိစ္စလေးတွေကြောင့် …. သွားမထုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး … မြို့ထဲသွားမယ့် လူကြုံ ရှိတဲ့အခါ .. သွားထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်နော် ။